मोदीले अर्को कार्यकाल जित्लान त ? सर्वेक्षणले के भन्छ ? « LiveMandu
२७ चैत्र २०७५, बुधबार १४:०४
भारतको आसन्न निर्वाचन अहिले ब्यापक चर्चामा छ, भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीले ५ वर्षपछि फेरि बाजी मार्छन त ? सबैलाई जान्न मन छ, मोदीको समर्थन अनि विरोध दुबै उतिकै तिब्र रुपमा भइरहेको अवस्थामा आउनुहोस केहि सिमुलेशन अनि सर्वेक्षणका नतिजाहरुमा ध्यान दिऔं ।
ईण्डिया टुडेकोको पोलिटकल स्टक एक्चेन्जका सर्वेक्षणहरुको नतिजाको सारसंक्षेप यहाँ छ । यसका अनुसार एनडिए अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक गभरमेन्सको चुनाव जित्ने संभावना ५० प्रतिशत छ । यस सर्वेक्षणलाई चेन्नई गणित इन्सटिच्यूटका तथ्याकंबिज्ञ राजिव कर्णधिकारले नेतृत्व गरेका हुन् । यसका अनुसार ७२ प्रतिशत संभावना एनडीएले २५० स्थान भन्दा बढि पाउने रहेको छ भनें ५० प्रतिशत संभावना पूर्णत जितेर बहुमतको सरकार ल्याउने रहेको छ । २२० सिट भन्दा कम हुन सक्ने संभावना भनें केवल ९ प्रतिशत मात्र रहेको यस सर्वेक्षण ल देखाँउछ । भाजपा र कग्रेस आईका भोटरले पार्टी भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको फेसका लागि भोट गर्ने तथ्य यस सर्वेक्षणले प्रगाढ रुपमा देखाएको छ ।
कंग्रेस आईले भनें २५० सिट भन्दा धेरै ल्याउने संभावना केवल ३४ प्रतिशत देखिन्छ । अमेरिकाको पछिल्लो राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा भएका यस्ता सर्वेक्षणहरु बास्तविक धरातलमा निकै कमजोर अनि चुनावी दौरमा निकै फरक पाइएको थियो तसर्थ केहि प्रश्नचिह्नका जवाफ भनें आउँदो समयको चुनावले नै दिनेछ ।
केहि महिनाअघि केहि स्टेटहरुमा भाजपाले कंग्रेस आई संग हारेको थियो तर यस सर्वेक्षणले ति स्थानहरुमा पनि अब भाजपा निकै दरो भइसकेको र मोदीको चर्चा र समर्थन निकै देखिएको पाएको भन्दछ ।
सबैभ्न्दा बढि हिमाञ्चल प्रदेशमा मोदीको ३६ प्रतिशत खुद सन्तुष्टि बिन्दु रहेका भोटरहरु रहेको पाइन्छ । त्यस्तै राजस्थानमा ३२ र मध्यप्रदेशमा २६ प्रतिशत मोदी प्रति सन्तुष्ट भोटरहरु छन् । पन्जाबमा भनें मोदीको समर्थन प्रतिशत नेगेटिभमा छ, माईनस १० प्रतिशत मोदीको समर्थन रहेको पन्जाब वासिन्दाहरुको खालिस्तान आन्दोलनका कारण रहेको बताइन्छ ।
केरलाका भनें ७२ प्रतिशत मान्छेहरु मोदीसंग असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । अब हेर्दै जाँउ नरेन्द्र मोदीको भाग्यले यस वर्ष उनलाई फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सि दिनेछ या राजनैतिक छालमा मोदी पनि सुस्तरि किनारा लाग्दै जानेछन ?